Golaha Cusub Ee Wakiilada Puntland Oo Maanta Lagu Dhaariyey Garowe – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho, Mareeg.com: Waxaa maanta magaalada Garowe lagu dhaariyey Golaha cusub ee Wakiilada maamulka Puntland oo habeen hore la shaaciyey magacyadooda.
Xildhibaanada manta la dhaariyey waxey kooban yihiin 66 xubnood, waxeyna kuraasta ku fadhinayaan 2014 -2019.
Murashaxiinta ayaa afar-afar loogu dhaariyey Kitaabka Qur’aanka, iyagoo ku dhaartay inay dadka reer Puntland si daacad ah oo hufanaan iyo wadaninimo leh ugu shaqeyn doonaan.
Munaasabadda dhaarta waxaa goobjoog ka ahaa Madaxweynaha hadda xilka haya Cabdiraxmaan Faroole, Madaxweynihii hore e Puntland Gen. Cade Muuse, iyo qaar kamid ah Musharixiinta 2014, Sidoo kale waxaa goobjoog ka ahaa qaar ka mid ah Isimmada Puntland.
Musharixiinta xilka Madaxweynaha iyo madaxweynaha xilkiisu dhamaadka yahay ayaa la soo wada fariisiyey booska marti sharafta ee ka soo horjeeda Xildhibaanada, waxaana ku weheliyey Madaxweynihi hore ee Puntland Gen. Cadde Muuse.
Waxaa munaasabadda ugu horeyntii ka hadley, Eng. Yusuf Abshir Cadami Guddomiyiha Guddiga Khilaafaadka iyo Afhayeenkii Guddiga xalinta Khilaafaadka, waxaana ay ka sheekeeyeen qaabkii wax u dheceen iyo shaqadii adkeyd ee guddigu ay soo qabteen.
Musharax Cali Cabdi Awaare oo Mikrofoonka lagu soo dhaweeyey ayaa ku hadley magaca Musharixiinta waxaana uu sheegey in ay hadda ku qanacsan yihiin qaabka wax u socdaan una hanbalyeynayaan Xildhibaanada cusub.
Guddoomiyaha Musharixiinta mucaaradka ah Gen.Cabdullaahi Siciid Samanter ayaa ka mid ahaa masuuliyiintii goobta ka hadley waxaana uu sheegey waxkasta oo dhacay iyo khaladkasta oo la galay in ay ka hor marinayaan danta dalka, haddana u taagan yihiin in ay ka qaybqaataan doorashada.
Madaxweynihii hore ee Puntland Gen.Cadde Muuse oo hadal kooban ka jeediyey madashii dhaarta ayaa sheegey in uu yahay ruux oday ah jecelna in uu nabadda ka shaqeeyo, waxaana uu ku booriyey in wada jir la ahaado mar kasta.
Madaxweynaha xilku ka dhamaanayo Dr.Cabdiraxmaan Maxamed Faroole ayaa ugu danbeyntii jeediyey khudbaddii uu ku soo xiraayey, si la mid ah masuuliyiintii hore ayuu sheegey in muhim ay tahay in maanta wada jirka iyo nabadda laga shaqeeyo. Madaxweyne Faroole ayaa ku amaaney Musharixiinta doorka ay qaateen taas oo uu yiri waa xil-kasnimo.
48-da saac ee soo aaddan ayey xildhibaanada baarlamaanku iska dhex dooran doonaan guddoomiyaha baarlamaanka iyo guddiga kumeel gaarka ah ee maamuli doona doorashada madaxtinimada.
8-da bisha Janaayo ee 2014 ayaa loo qorsheeyey in la qabto doorashada madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa, waxaana ku tartamaya in ka badan 20 musharrax.